plugins | MyanmaPress Blogging Platform
ဧ​ရာ ဝက်ဘ် ကစ် (Ayar Web Kit)
This entry was posted in plugins, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်​ကိ​စ္စ​များ​and tagged internationalization, localization, plugins, translation, wordpress, ဘာ​သာ​ြပန်, ြမန်​မာ​လို on November 21, 2010 by mmpressadmin. Plugins List
Leaveareply ေအာက်​ေဖာ်​ြပ​ပါ Plugin များ​ကို ေရး​သား​ခဲ့​သူ​များ အား​လံုး​ကို ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ်​မှ အ​ထူး​ေကျး​ဇူး​တင်​ရှိ​ပါ​သည်။
This entry was posted in plugins and tagged list, plugins, wordpress, ြမန်​မာ့​ပ​ရက်စ် on October 13, 2010 by mmpressadmin. Search for: